Bogga ugu weyn Waa Maxay Bangiga Maalgashigu Sideese U Shaqeeyaa?
Sawir laga soo qaaday pexels.com
Inta badan shirkadaha waaweyn, baananka maalgashiga ayaa ka caawiya maareynta maaliyadda. Hadday shirkaddu soo saareyso saamiyo, horumarinayso teknolojiyad heer sare ah, ama raadineyso inay maalgeliso ballaarinta xarunta ama wax kale oo aad u weyn maalgelinta raasumaalka, baananka maalgashiga ayaa bixiya adeegyada iyo taageerada si ay suurtogal u noqoto.
Maqaalkani wuxuu si aad ah u sharraxayaa waxa bangiyada maal -gelintu ku lug leedahay iyo sida ay u shaqayso. Akhrinta maqaalkan, waxaad had iyo jeer fahmi doontaa qaababka gaarka ah ee bangiyada maalgashiga, dhinacyadiisa kala duwan, iyo waxyaabo kaloo badan.
Waa maxay Bangigu maalgashigu?
Bangiga maalgashiga waa qayb ka mid ah bangiyada oo ka caawiya shaqsiyaadka iyo ururada kor u qaadida raasamaalka iyo bixinta talooyinka maaliyadeed.
Waxay u dhaqmaan sida The Go-Betweens oo loogu talagalay soo-saarayaasha amniga iyo maalgashadayaasha, waxayna ka caawiyaan shirkadaha cusub inay dadwaynaha tagaan. Ama waxay ku iibsadaan dhammaan saamiyada la heli karo qiimo ay go'aamiyeen khubaradooda ama waxay dib uga iibin doonaan dadweynaha, ama waxay iibin doonaan saamiyada iyagoo wakiil ka ah soo -saaraha waxayna kasbadaan guddi saamigii kasta oo la iibiyo.
Akhri ALSO: Shabakadaha Talooyinka Maalgashiga ee ugu Fiican ee leh Xogta Waqtiga ee 15
Fahamka Bangiyada Maalgashiga
Bangiyada maalgashigu waxay u qoraan deymo cusub iyo dammaanad sinnaan shirkado badan, waxay ka caawiyaan iibka dammaanadaha, waxayna fududeeyaan isku -biirinta iyo iibsiga, dib -u -habeynta, iyo xirfadaha dillaaliinta ee maalgashadayaasha hay'adaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba. Bangiyada maalgashigu waxay sidoo kale kula taliyaan soo saarayaasha soo saarista iyo meelaynta saamiyada.
Nidaamyo bangi oo maalgashi oo waaweyn oo badan ayaa ku xiran ama ka hoos shaqeeya hay'adaha bangiyada waaweyn, qaar badan oo ka mid ahna waxay noqdeen magacyo qoys, kuwa ugu caansan Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch, iyo Deutsche Bank.
Bangiyada maalgashigu waxay caawimaad ka siiyaan macaamil maaliyadeed oo aad u adag. Haddii macmiilka bangiga maalgashiga ahi uu ka fikirayo iibsi, isku -biirid, ama iibin, waxay bixin karaan talo ku saabsan inta shirkaddu u qalanto iyo sida loo qaabeeyo heshiiska. Waxa kale oo ku jiri kara soo saaridda dammaanado si lacag loogu ururiyo kooxaha macmiilka iyo u diyaarinta dukumintiga Guddiga Sicirrada iyo Sarrifka (SEC) ee looga baahan yahay shirkad si ay u gasho dadweynaha.
Bangiyada maalgashigu waxay shaqaaleeyaan bangiyo maalgashi oo ka caawiya shirkadaha, dawladaha, iyo kooxaha kale qorsheynta iyo maareynta mashaariicda waaweyn, u badbaadiya macaamiishooda waqti iyo lacag iyagoo aqoonsanaya khataraha mashruuca ka hor macmiilka.
Maxay yihiin Dhinacyada Bangiyada Maalgelinta?
Laba meelood oo waaweyn oo xiisaynaya bangiyada maalgashiga ee qalin -jabiyayaashu waa caadi ahaan isku -biirinta iyo iibsashada (M&A) iyo ku -ganacsiga koontadaada.
1. Isku biirid iyo Hanti
M&A waxaa loola jeedaa isku -darka shirkado kala duwan. Midowgu waa isku darka laba shirkadood oo mid cusub galay. La wareegistu waxay dhacdaa marka hal shirkad iibsato mid kale, laakiin kuwo cusub lama abuuro.
2. Ku -ganacsashada koonto u gaar ah
Tan waxaa loo fahmay in loola jeedo marka bangigu ku shaqeeyo akoonkiisa si uu u helo dheeftiisa. Tan waxaa ka mid noqon kara qaadashada jagooyinka gorfaynta gudahood si taxaddar leh loo xisaabiyey oo la xakameeyey si looga fogaado in bangiga loo soo bandhigo khataraha halista ah. Sanadihii la soo dhaafay, koboca dhinacan ee bangiyada maalgashiga ayaa horseeday rabitaanka cuntada oo kordhay khatarta iyo, mararka qaarkood, khasaare weyn.
Helitaanka raasamaal aad u badan ayaa lagama maarmaan u ah maalgelinta ballaarinta ama horumarka ballaaran; Iibinta damaanad -qaadayaal badan oo maalgashadeyaal ah, iyo suurtogalnimada suuqyo dhowr ah oo dalal kala duwan ah, ayaa ah hab wax ku ool ah oo kor loogu qaadi karo raasamaal badan iyada oo aan loo soo bandhigin maalgashadayaasha khatar aan loo baahnayn.
ARAG SIDOO KALE: Waa maxay Securities in Finance? Guudmarka iyo Sida ay u Shaqeyso
Maxay U Baahan Yihiin Xirfadaha Iibinta Badan Si Ay U Noqdaan Bangi Maalgashi?
Magdhawga bangiga maalgashigu wuxuu inta badan ku xiran yahay xirfadaha uu shaqsigu keeno jagada gudaha iyo dibaddaba ee warshadaha adeegyada maaliyadeed. Ka sokow aqoonta ganacsiga, baananka maalgashigu waa inay lahaadaan xirfado gorfayn, waayo -aragnimo maamul iyo waqti mashruuc, iyo xirfado xooggan oo dadka dhexdooda ah. Waa kuwan afarta xirfadood ee ugu sarreeya ee loo baahan yahay si loogu guuleysto bangiyada maalgashiga:
1. Hoggaaminta Kooxda
Sababtoo ah baananka maalgashiga ayaa inta badan ka shaqeeya kooxo ku-meelgaar ah oo ka kooban shaqaale, maamuleyaal macmiil, iyo dhinacyo kale oo saddexaad, waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay isku-dubbaridaan oo toosiyaan dadaallada kooxaha kala duwan. Khibradda hoggaaminta waxaa lagu heli karaa:
Ka qaybqaadashada mashaariicda inta aad waxbarashada ku jirto
Hesho shahaadooyin xirfadeed oo ay ku jiraan qaybaha hoggaamintu
Iskaa wax u qabso ururrada aan macaash doonka ahayn si ay u taageeraan shirkadaha
2. Waayo -aragnimada isku -biirinta iyo iibsiga
Diyaarinta iyo hirgelinta isku -darka shirkad ama la wareegidda guud ahaan waxay qaadataa waqti iyo dadaal badan. Bangiyada maalgashiga waxay khibrad u yeelan karaan isku -biirinta iyo iibsiga iyagoo ku biiraya koox ka tirsan iibiyaha ama iibsadaha dhinaciisa macaamilka.
Doorka bangiga maalgashigu wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran hadba dhinaca ganacsiga uu bangi maalgashi ku jiro. Si kastaba ha noqotee, xirfadaha qaarkood ayaa muhiim u ah labada xaaladoodba. Bangiyada maalgashiga waa inay:
La soco isbeddellada suuqa iyo warshadaha
Fahmaan habka tartanka iyo xeeladaha
Ogow sida loo sameeyo falanqaynta maaliyadeed ee dhismayaasha raasumaalka iyo saadaasha maaliyadeed
3. Maareynta Maalgashiga
Maareeyayaasha maalgashigu waxay ka caawiyaan shirkadaha inay hubiyaan in dhaqaalahooda loo maareeyo si hufan iyo hab wax ku kordhinaysa ujeeddooyinka ganacsiga. Heerka khibradda loo baahan yahay waxay kor u qaadaa fursadaha shaqo ee bangiyada maalgashiga iyagoo siinaya macluumaad ku saabsan hababka maareynta maaliyadeed ee shirkadaha.
Qalabka falanqaynta maaliyadeed iyo aaladaha falanqaynta si loo maareeyo maaliyadaha shirkadaha ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa hawlaha bangiyada maalgashiga, sida qiimeynta saamiyada cusub iyo curaarta, xisaabinta qiimaha bartilmaameedka helitaanka, iyo go'aaminta halista iyo kartida.
Waad rabi kartaa inaad aragto: Maxay Ka Dhigan Tahay Dhaqaale Gaadhi | Ma mudan tahay | Tusaha Khubarada
4. Khibrad Bangi
Isku -biirinta & Wax -weydiintu waxay sharraxaysaa dariiqyada kala duwan ee loo maro xirfadda sida bangi maalgashi, oo midkood ka kooban yahay layliyo “boodh” ama shaqooyin bangiyo, waaxyo maaliyadeed oo shirkadeed, ama raasumaal raasumaal oo gaar loo leeyahay/shirkado raasumaal ah si loo helo.
Bangiyadu waxay bixiyaan jagooyin badan oo kor u qaada astaanta musharraxa bangiga maalgashiga iyagoo siinaya xirfado iyo waayo -aragnimo wax ku ool ah oo la shaqaysa macaamiisha shirkadaha. Waxa kale oo ay wadaagaan aalado badan oo gorfaynaya iyo hababka maareynta maaliyadeed ee bangiyada maalgashigu ku tiirsan yihiin shaqadooda.
Waa Maxay Qaab -dhismeedka Bangiga Maalgashigu?
Bangiyada maalgashigu inta badan waxay u qaybsan yihiin laba qaybood: “dhinaca iibsadaha” iyo “dhinaca iibiyaha.” “Dhinac-iibsadaha” wuxuu la shaqeeyaa sanduuqyada hawlgabka, maaliyadaha wadaagga ah, iyo maalgelinta xayndaabka wuxuuna ka caawiyaa hay'adaha maalgashiga inay sare u qaadaan soo-celinta markay ka ganacsanayaan/maal-gelinayaan dammaanadaha sida kaydka iyo curaarta. “Dhinaca iibiyuhu” guud ahaan waxaa loola jeedaa iibinta saamiyada IPO ee dhowaan la soo saaray, dhigista dammaanado cusub, bixinta adeegyo suuq-samaynta, ama ka caawinta macaamiisha socodsiinta macaamil ganacsi. Samaynta suuqa waxay ku saabsan tahay haynta kaydka si ay awood ugu yeelato ka ganacsiga - awood u yeelashada dalabka iyo iibinta saamiyada.
Waxqabadyada bangiyada maalgashiga badan ayaa sidoo kale loo qaybiyaa saddex qaybood: xafiiska hore, xafiiska dhexe, ama xafiiska dambe.
1. Xafiiska hore
Adeegyada bangiga maalgashiga madaxa guud guud ahaan waxaa ka mid ah wadashaqayn toos ah oo lala yeesho macaamiisha iyo ka qaybgalayaasha suuqa. Waxqabadyada waxaa ka mid ah isku biirinta iyo iibsiga, maaliyadda shirkadaha iyo maareynta maalgashiga xirfadeed ee shakhsiyaadka ama hay'adaha qiimaha saafiga ah leh, falanqaynta xirfadeed ee shirkadaha iyo suuqyada, iyo dejinta xeeladaha maalgashiga.
Akhri ALSO: 9 Xirmooyinka Heerka Ugu Fiican Sanadka 2021 | Tusaha Khubarada
2. Xafiiska Dhexe
Adeegyada bangiyada Maalgelinta Xafiiska Dhexe waxaa ka mid ah hawlo khaas ah sida khasnadda, u hoggaansanaanta iyo xannibaadaha dawladda ee macaamiisha xirfadda leh, iyo maareynta khatarta. Tan waxaa kale oo ka mid ah socodka lacagaha: la socodka lacagaha soo gala iyo kuwa baxaya ee shirkadda; kaas oo go'aaminaya inta raasamaal ee ay shirkaddu haysato si looga fogaado dhibaatooyinka dhaqaale. Tani waxay dib ugu noqonaysaa hawlaha xafiiska weyn iyadoo la go'aaminayo baaxadda waxa ay samayn karaan.
3. Xafiiska dhabarka
Xafiiska Dib -u -dejinta Adeegyada bangiyada maalgashiga waxay ka kooban yihiin waxqabadyo hawlgal oo awood u siinaya bangiyada inay si hufan u shaqeeyaan. Waxay daryeelaan waxyaabaha sida xaqiijinta ganacsiga, iyagoo hubinaya in dammaanadaha saxda ah la iibsaday, la iibiyey, oo lagu dejiyay qaddar sax ah. Waxay kaloo mas'uul ka tahay aaladaha softiweerka iyo teknolojiyada ee u oggolaanaya ganacsatada inay shaqadooda qabsadaan; Hubi inay yihiin moodooyinkii iyo astaamihii ugu dambeeyay, oo abuuraan algorithms ganacsi oo cusub iyo inbadan.
Sida Loo Galo Bangiga Maalgashiga
Qof kasta oo la yaaban sida loo galo bangiyada maalgashiga waa inuu ogaadaa in howshu ay ka bilaabato kasbashada shahaadada koowaad ee maaliyadda, dhaqaalaha, ama goob la xiriirta. Tallaabooyinka xiga waa in la helo waayo -aragnimo shaqo oo la taaban karo oo duurka dhexdeeda ah oo la noqdo Falanqeeyaha Maaliyadeed ee Shahaadada haysta ee CFA oo ay weheliso shahaadooyinka bangiyada kale ee maalgashiga. Shahaadada Masterka ee maaliyadda ayaa iyaduna qiimo leh.
Akhri ALSO: Sida Loo Noqdo Dillaal Amaah Ganacsi 2021 | Tusaha Khubarada
Shahaadooyinka iyo aqoonsiyada loo baahan yahay si ay u noqdaan bangi maalgeliye
Kahor intaadan u shaqayn bangi maalgashi ama dillaal, waa inaad iska diiwaangelisaa Hay'adda Xakamaynta Warshadaha Maaliyadeed (FINRA). Si aad u hesho ruqsadda, waa inaad ku gudubtaa imtixaano taxane ah.
Ruqsado dheeraad ah ayaa looga baahan yahay inay iibiyaan badeecadaha iyo adeegyada maalgelinta qaarkood, iyo cusboonaysiinta shatiga FINRA waxaa ka mid ah ka -qaybgalka koorsooyinka waxbarashada ee sii socda.
Waa kan liiska shahaadooyinka kale ee kordhiya fursadaha qofka ee ah inuu boos ka helo bangiyada maalgashiga.
Falanqeeyaha Maaliyadeed ee Chartered (CFA) oo ka socda Machadka CFA
Xirfadlaha Bangiyada Maalgelinta Chartered (CIBP) oo ka socda Golaha Bangiyada Maalgashiga ee Ameerika
Aqoonsiga Xirfadlaha Bangiyada Maalgelinta (IBPC) ee Machadka IBP
Machadka CFA Falanqeeyaha Maaliyadeed ee Chartered
Machadka CFA wuxuu sharraxayaa afarta tallaabo ee loo baahan yahay si loo noqdo hanti -haye:
Gudub dhammaan saddexda heer ee imtixaannada CFA ee tijaabiya aqoonta maaliyadeed iyo sidoo kale heerarka anshaxa iyo xirfadeed.
Buuxi shuruudaha waayo -aragnimada shaqada kahor, inta lagu jiro, ama ka dib dhammaystirka barnaamijka CFA.
Soo gudbi laba ama saddex xaraf oo tixraacyo xirfadeed oo faahfaahsan waayo -aragnimada shaqada iyo dabeecadda xirfadeed.
Codso si aad u noqoto hantiile sida xubin joogto ah oo leh khibrad shaqo oo u qalma sida maamulaha maalgashiga, ama xubin iskaashi ah haddii uusan awoodin inuu buuxiyo shuruudaha si uu u noqdo xubin joogto ah.
Shuruudaha Waxbarashada Loo Baahan Yahay Inay Noqdaan Bangi Maalgashi
Waxbarashada bangiyada maalgashiga guud ahaan waxay ku bilaabataa shahaadada bachelorka ee adeegyada maaliyadeed, maaliyadda, ama dhaqaalaha. BLS waxay sheegaysaa in jagooyinka sare ee bangiyada maalgashiga iyo warshadaha kale ee dammaanadda ay inta badan u baahan yihiin MBA ama shahaado sare oo kale xagga maaliyadda, dhaqaalaha, ama xisaabta.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee waxbarashada maaliyadeed waa fursadda lagu dhisi karo shabakad xirfadeed oo ay taageerto abaabulidda tababar shaqo bangiga maalgashiga inta lagu jiro waxbarashadaada.
Immisa ayuu kasbadaa Bangiga Maalgashiga?
Heerarka mushaharka ee bangiyada maalgashiga ayaa ka mid ah kuwa ugu sarreeya warshadaha adeegyada maaliyadeed. Mushaharka bangiyada maalgashiga ayaa saamayn ku leh inta ay ku jireen warshadaha iyo xirfadaha ay miiska soo saaraan.
ARAG SIDOO KALE: 20 Shaqooyin Oo Sanadkiiba Bixiya $ 100k $ 2021k Iyadoo Aan Lahayn Shahaado XNUMX
Mushaharka Bangiyada Maalgashiga
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka (BLS), mushaharka dhexe ee sanadlaha ah ee suuqyada, badeecadaha, iyo wakiilada iibinta adeegyada maaliyadeed bishii Maajo 2020 waxay ahayd $$ 64,770 sanadkii iyo $ 31.14 saacaddii. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego BLS, wakiilada la shaqeeya dammaanadaha, qandaraasyada badeecadaha, iyo maalgashiyada maaliyadeed ee kale waxay kasbadaan mushahar sanadle ah oo dhexdhexaad ah $ 86,840.
Sida laga soo xigtay BLS, bangiyada maalgashiga ee ku takhasusay maaliyadda shirkadaha iyo isku -darka iyo iibsashada ayaa filan kara inay helaan gunno aad u weyn. Gunnada boosaska bangiyada ee maalgashiga heerka sare waxay ka badan karaan mushaharka sannadlaha ah.
Sida laga soo xigtay PayScale, celceliska mushaharka sannadlaha ah ee baananka maalgashigu waa ku dhawaad ​​$ 100,000 laga bilaabo Juun 2020. PayScale wuxuu bixiyaa tusaalooyinka soo socda ee magdhowga caadiga ah (mushaharka iyo gunnada) bangiyada maalgashiga heerarkooda kala duwan ee xirfaddooda:
$ 76,000 waa mushaarka bilowga ah.
$ 91,000 oo leh hal ilaa afar sano oo waayo -aragnimo ah
$ 125,000 kuwa leh khibrad shan ilaa sagaal sano ah
$ 146,000 oo loogu talagalay kuwa leh khibrad 10 ilaa 19 sano ah
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Bangiyada Maalgashiga
Waa maxay bangiyada maalgashiga?
Bangiyada maalgashigu waa qayb gaar ah oo bangiyada oo la xiriirta abuurista raasumaalka shirkadaha kale, dowladaha, iyo hay'adaha kale.
Bangiga maalgashiga muxuu sameeyaa?
Bangiyada maalgashiga waxay ka caawiyaan shirkadaha, dawladaha, iyo kooxaha kale inay qorsheeyaan oo maamulaan mashaariicda waaweyn, iyagoo u badbaadiya macaamiishooda waqti iyo lacag iyagoo aqoonsanaya khataraha la xiriira mashruuca ka hor inta uusan macmiilku hore u socon.
Bangiyada Maalgashigu Intee Aay Helaan?
Bangiyada maalgashiga guuleysta waxay kasban karaan $ 10 milyan sanadkii.
Maxay yihiin 4 -ta bangi ee maalgashiga ugu sarreeya?
Afarta waaweyn waa JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup, iyo Morgan Stanley. Dhowr koox oo kale oo caalami ah ayaa ku jira cidhibtooda, oo ay ku jiraan Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, iyo UBS.
Bangiga maalgashiga door ka ciyaaraan caawinta macaamiishooda si ay u ururiyaan raasumaal si ay u maalgeliyaan hawlo kala duwan una ballaariyaan ganacsigooda. Waa dhexdhexaadiyeyaal talo -bixin maaliyadeed oo ka caawiya shirkadaha iyo dawladaha inay lacag u ururiyaan adeegsiyo kala duwan.
In kasta oo hawshani ay gacan ka geysaneyso habsami -u -socodka giraangiraha hanti -dhowrka, haddana warshadaha bangiyada maal -gashiga ayaa si gaar ah isha loogu hayaa, gaar ahaan sababta oo ah waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa waxyaabo badan oo ka mid ah geeddi -socodka lacag -ururinta.
Investopedia.com - Bangiga Maalgashiga
online.maryville.edu - Waa Maxay Bangiga Maalgashigu? Qeexid, Xirfadaha & Mushaharka
gudaha xirfadaha.co.uk - Goobaha Shaqada: Bangiga Maal -gashiga ee Meel Gaarka ah
Shabakadaha Talooyinka Maalgashiga ee ugu Fiican ee leh Xogta Waqtiga ee 15
Bangiyada gaarka loo leeyahay Vs maamulka maalka | Top 10 Kala duwanaansho
Amaahda Amaahda | Tusaha Khubarada
Bangiyada ugu Fiican New Jersey NJ ee 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Debaajiga Ugu Yar
Haddii aad ka fekereyso inaad bangi la yeelato bangi New Jersey oo aad rabto taabashada heerka sare iyo qiimaha…
Hubi qaabka 2021: Qayb ka mid ah Jeegga | Maxaan ogaadaa
Jeegaggu kuma iman tilmaamo, waxayna saamayn kugu yeelan kartaa dhaqaale ahaan haddii aad khalad samayso markaad mid bixinayso…
Beddelka BofA ee Chase: Sida ugu Fudud ee Lagu Aadayo 2022
Si aad lacag ugu wareejiso saaxiib ama xubin qoyskaaga akoonnadaada Bank of America una wareejiso Chase…
Dulmarka Maalgelinta Rabitaanka: Sida ay u shaqayso
Dhowr goobood oo aad lacagtaada ku maalgashan karto ayaa batay laakiin waxa ugu muhiimsan waa inaad hubiso taas…
Way adag tahay in laga hadlo PayPal iyada oo aan la sheegin Elon Musk ama eBay. Shirkadda weyn ee tignoolajiyada maaliyadda ayaa…